My iPhone Nọgidesiri Na ekweisi Ọnọdụ. Nke a bụ ndozi ahụ! - Iphone
Kedu ka ị ga -esi were chia ka ị felata?
iphone 7 na -ekwu na enweghị sim
ihuenyo iphone 5c m gbara oji
otu esi enweta ihuenyo ipad ka o bugharia
iphone na -agbanyụ onwe ya
My iPhone Nọgidesiri Na ekweisi Ọnọdụ. Nke a bụ The Real Idozi!
My Iphone Is Stuck Headphones Mode
’Re bụ nnọọ n'aka na ekweisi anaghị abanye na iPhone gị, n'ihi na, nke ọma, ha abụghị. See na-ahụ 'ekweisi' n'elu olu mmịfe mgbe ị pịa bọtịnụ olu, mana iPhone gị anaghị eme ụda ọ bụla. Tried nwaala nrụpụta siri ike, tinye ekweisi gị, ma wepụta ha ọzọ, mana ọ naghị arụ ọrụ. N'isiokwu a, m ga-akọwa ihe mere gị iPhone rapaara na ekweisi mode , ihe trickzọ dị egwu ị ga-esi si na isi okwu isi gị ma ọ bụ ọdụ ụgbọ mmiri Lightning , esi edozi nsogbu ahụ nke ọma !
My iPhone Enweghị A Headphone Jack! Olee Otú Ọ Pụrụ Nọgidesiri Na ekweisi na ọnọdụ?
Apple tufuru jackphone headphone mgbe ha wepụtara iphone 7. Ọ bụ ezigbo esemokwu n'oge ahụ, mana ọtụtụ mmadụ akwagala n'iji ekweisi Bluetooth dị ka AirPods.
Agbanyeghị, Apple ewepụghị ikike iji ekweisi nwere waya ọhụrụ na iPhones ọhụrụ. Purchasezụta ihe iPhone 7 ma ọ bụ nke ọhụụ bụ nke nwere eriri ekweisi nwere wired nke na-abanye kpọmkwem na ọdụ ụgbọ mmiri Lightning nke iPhone (makwaara dị ka ọdụ ụgbọ mmiri na-akwụ ụgwọ).
IPhone 7, 8, ma ọ bụ X ọhụrụ na-agụnye dongle nke na-ahapụ gị ijikọ ekweisi ochie gị na ọdụ ụgbọ mmiri Lightning nke iPhone gị. Agbanyeghị, Apple kwụsịrị tinyere dongle a na iPhone XS, XS Max, na XR.
Ọ bụ ezie na ụdị iPhone 7 na ụdị ọhụụ enweghị mgbatị isi okwu ọdịnala, ha ka nwere ike ịrapara na ọnọdụ ekweisi! Nzọụkwụ dị n'okpuru ga-enyere gị aka idozi ụdị iPhone ọ bụla nke rapaara na ọnọdụ isi.
Mba, iPhone, N’ebe ahụ Adighi Ekweisi arụnyere na!
Gị iPhone rapaara na ekweisi mode n'ihi na ọ na-eche na ekweisi na-agbanye n'ime ụda isi ma ọ bụ n'ọdụ ụgbọ mmiri Lightning, n'agbanyeghị na ha abụghị. Nke a na - abụkarị nsogbu site na nsogbu isi okwu ma ọ bụ ọdụ ụgbọ mmiri n'onwe ya. 99% nke oge ọ bụ nsogbu ngwaike, ọ bụghị nsogbu ngwanrọ.
Wepu Ohere nke Nsogbu Software
Thezọ kachasị mfe iji hụ na nsogbu sọftụwia anaghị eme ka iPhone gị nọrọ na ọnọdụ ekweisi gbanyụọ ya wee laghachi ọzọ. Iji gbanyụọ iPhone gị, pịa ma jide bọtịnụ ike (nke a makwaara dị ka thera / Tetanụ bọtịnụ) wee pịgharịa bọtịnụ n'akụkụ 'slide to power off' n'ofe ihuenyo.
Ọ bụrụ na ị nwere iPhone X ma ọ bụ karịa, pịa ma jide bọtịnụ Side na ma bọtịnụ olu ruo mgbe 'slide ka ike gbanyụọ' na-egosi na ihuenyo. Swipe akara ngosi ikike n'aka ekpe gaa n'aka nri iji mechie iPhone X ma ọ bụ ọhụrụ.
Ọ nwere ike were 20 sekọnd ma ọ bụ karịa ka iPhone gị gbanyụọ, nke ahụ zuru oke. Iji na-atụgharị gị iPhone azụ, jide ike button (iPhone 8 na ndị okenye) ma ọ bụ Side button (iPhone X na ọhụrụ) ruo mgbe Apple logo na-egosi na ihuenyo. I nwere ike ịhapụ ike button ma ọ bụ Side button mgbe Apple logo na-egosi.
Ọ bụrụ na iPhone gị ka nọgidere na ekweisi ntị mgbe iPhone gị tụgharịrị, enwere nsogbu ngwaike na iPhone gị. N'oge a, nsogbu a na-akpata otu n'ime ụzọ abụọ:
Iberibe ihe rapaara n'ime ọdụ ekweisi ma ọ bụ ọdụ ụgbọ mmiri na-eme nzuzu gị iPhone na-eche na ekweisi na-agbanye.
Igweisi ekweisi ma ọ bụ ọdụ ụgbọ mmiri mebiri emebi, ma ọ bụ n'ụzọ anụ ahụ ma ọ bụ mmiri mmiri.
Lelee Anya n'ime iPhone gị
Nara ọkụ ma nwuo n’ime iPhone isi gị ma ọ bụ ọdụ ụgbọ mmiri Lightning. Enwere mpekere ọ bụla rapaara n'ime? Ahụla m ihe niile si na osikapa, na agba aja aja, na ndụmọdụ agbajiri isi ekwe ọnụ ala rapaara n'ime. Gbalị iwepụta ihe site na isi okwu iPhone gị ma ọ bụ ọdụ ụgbọ mmiri Lightning siri ike nke ukwuu, ụfọdụ Apple techs agaghịdị anwa.
Okingkpọgharị na nkuku ntị ekwenti gị ma ọ bụ ọdụ ụgbọ mmiri Lightning nwere ike imebi, mana ọtụtụ ndị mụ na ha rụkọtara kwetara na ọ bara uru n'ihe ọghọm n'ihi na ha enweghị ihe ọ bụla funahụrụ. Ọ bụrụ na m kwesịrị ịkọ nkọ, m ga-asị na m nwere ihe ịga nke ọma banyere 50% nke oge mgbe m gbalịrị iwepụta ihe site na isi igwe isi nke onye ahịa mgbe m rụrụ ọrụ na Storelọ Ahịa Apple.
Olee Otú M Ga-esi Junk si My iPhone si Headphone Jack?
Enweghị ụzọ ziri ezi isi mee nke a, Apple Stores enweghị ngwaọrụ ọ bụla ezubere iji wepụ irighiri ihe site na isi igwe. Ebe ahụ dị Otú ọ dị, ụfọdụ aghụghọ na-akwadoghị aghụghọ nke Apple techs na-eji mgbe ụfọdụ iji nweta ihe. Kpachara anya - ọ nweghị nke ọ bụla n'ime ha bụ ụzọ a kwadoro Apple n'ihi na ha nwere ike mee mmebi, mana enweela m ihe ịga nke ọma na onye ọ bụla n’ime ha n’ọnọdụ dị iche iche.
The BIC Pen aghụghọ
Achọrọ m ide edemede a ka m wee nwee ike ịkọrọ gị aghụghọ a. Otu Apple Genius gosiri m otu esi eme ya, ma m ka na-eche na ọ dị mma. Na-adọ aka ná ntị: Gị pen agaghị lanarị usoro a. Nke a bụ otu esi eji pen BIC iji wepu irighiri ihe site na isi okwu isi okwu nke iPhone:
Jiri mkpịsị aka BIC mara ọkwa ma wepụ okpu.
Jiri ngwa mkpaji iji dọpụta mkpịsị odee site n'ụlọ plastik.
A na-etinye ọnụ ọnụ ya na katrij gbara gburugburu nke nwere ink.
Na-abụghị njedebe nke katrij bụ zuru oke nha iji wepu ahihia na nkpu isi okwu.
Fanye na njedebe n'ime ekweisi Jack na jiri nwayọọ ighikota na esighi ike nke irighiri ihe, na mgbe ikwanye ya nke gị iPhone ma ọ bụ iPad.
Echekwala m ọtụtụ nkata isi na-eji aghụghọ a. Kpachara anya ka ị ghara ịpịbiga ya ókè. Ọ bụrụ na ụmụ irighiri ahihia anaghị apụta, gaa na ntinye ọzọ.
Gbalịa na-eji a ike nke abịakọrọ ikuku ịfụ ikuku kpọmkwem n'ime gị iPhone si ekweisi Jack. Nke a nwere ike ịrụ ọrụ ọbụlagodi na ị hụghị ihe ọ bụla rapaara n'ime. Mkpakọ ikuku nwere ike ịtọghe mpekere nke ga-eme ka ọ maa jijiji ma ọ bụ wepụ ya kpamkpam. Bụrụ onye dị nro: Etinyekwala eriri ahụ n'ụzọ niile n'ime eriri igwe ntị gị nke iPhone ma bido ịfụ. Malite site na mpụga nke iPhone gị ma rụọ ọrụ n'ụzọ gị.
Ọ bụrụ na ịnweghị iko ikuku jikọtara ọnụ, ị nwere ike gbalịa ịfụpụ ya n’onwe gị, mana enweghị m mmasị na nhọrọ ahụ n’ihi na ume anyị nwere mmiri mmiri nke nwere ike imebi sekit nke iPhone gị. Ọ bụrụ na ọ dị gị ka ọ nweghị ihe funahụrụ gị, yabụ, jisie ike.
N'ezie mkpa tweezers nwere ike mgbe ụfọdụ iru nnọọ oke n'ime sere a mpempe osikapa ma ọ bụ ndị ọzọ irighiri ihe si iPhone si ekweisi Jack. Iji tweezers dị egwu, n'agbanyeghị. Ọ dị ọtụtụ dị ka egwuregwu a na-akpọ Ọrụ (nke Milton Bradley). Ọ dị mfe imebi akụkụ nke isi okwu isi ma ọ bụrụ na ị na-atụgharị tweezers n'ime oke.
Anaghị m akwado nke a, Mana…
Fọdụ ndị maara ihe na teknụzụ (na nzuzo, ụfọdụ Apple Geniuses) enweela ihe ịga nke ọma na-ewepụta irighiri ihe sitere na mkpuchi isi okwu iPhone site na ịtọpụ iPhone ma kpochapụ irighiri ndị dị n'okpuru jaketị isi. Enwere ụfọdụ magburu onwe teardown nduzi nke iPhones ọ bụrụ na ị ga-achọ ịnwale, mana Adịghị m akwado ka ị mee.
Kedụ ka m ga - esi si na iPhone si Lightning Port?
Dika nkpu isi okwu, o nwere ike isiri ike iwepu egbe na irighiri ihe site n'ọdụ ụgbọ mmiri Lightning. Zọ kachasị nchebe iji wepu nsị site na ọdụ ụgbọ mmiri iPhone bụ iji brọsh na-egbochi mgbochi.
Ọ bụrụ n’ịgbalịa iji ihe dị ka mpempe akwụkwọ ma ọ bụ mkpịsị aka hichaa ọdụ ụgbọ mmiri Lightning, ị nwere ike ibute ihe egwu nke ịkpata ụgwọ eletriki n’ime iPhone gị, nke nwere ike ibute ọbụna mmebi karịa. Toothpicks dịkwa ize ndụ, n'ihi na ha nwere ike ịdaba ma rapara n'ime iPhone gị.
Otú ọ dị, ihe ka ọtụtụ ná ndị mmadụ enweghị brush-static brush, nke ahụ dịkwa mma. Ihe eji eme ohuru ohuru, ezighi ezi nke ezé na-eme ezigbo ngbanwe ma ọ bụrụ na ịnweghị mgbochi mgbochi mgbochi.
The Cocktail Straw Atọ
A pụkwara ịkpọ usoro a 'aghụghọ kọfị', ebe enwere ike iji ya rụọ ọrụ. Gbasaa ọnụ nke ahịhịa mmanya gị ma ọ bụ kọfị kọfị ka ọ nwee ike dabara n'ime ọdụ ụgbọ mmiri Lightning nke iPhone gị. Jiri mkpịsị ahịhịa ahịhịa ahịhịa ọka ka ịchacha ma ọ bụ kpochaa egbe ọ bụla site n'ọdụ ụgbọ mmiri Lightning.
Mkpakọ ikuku na tweezers bụkwa azịza ga-ekwe omume ma ọ bụrụ na ihe abanye na gị na ọdụ ụgbọ mmiri Lightning nke iPhone gị.
Agbalịrị M Ihe Nile Ma iPhone M Ka Nọgidere Na Ọnọdụ Igweisi!
Ọ bụrụ na gị na iPhone ka anaghị arụ ọrụ mgbe ị nwesịrị ihe niile dị n'elu, enwere ezigbo ohere iPhone gị kwesịrị idozi. Ọtụtụ mgbe, ụda ekweisi ma ọ bụ ọdụ ụgbọ mmiri Lightning na iPhone ga-akwụsị ịrụ ọrụ maka otu n'ime ihe abụọ:
Otu ihe doro anya maka iPhones na-arapara na ọnọdụ ekweisi bụ mmebi mmiri, na ọtụtụ oge ndị mmadụ amaghị etu ọ ga-esi mee. Nke a bụ otú mkparịta ụka ahụ si gaa: M ga-ajụ, 'you bụ onye egwuregwu?', Ha ga-asị ee. M ga-ajụ, 'you na-ege egwu mgbe ị na-agba ọsọ ma ọ bụ na-arụ ọrụ?', Ha ga-asị ee ọzọ. I nwere ike ịma ihe mere?
ogologo oge ka mgbaghara mbata na ọpụpụ na -ewe
Ọtụtụ oge, nsogbu a na - akpata mgbe ọsụsọ na-agba n’eriri ekweisi onye na-agba ọsọ. N'oge ụfọdụ, obere ọsụsọ na-abanye n'ime isi okwu isi ma ọ bụ ọdụ ụgbọ mmiri Lightning ma mee ka iPhone ha dinara na ọnọdụ isi.
Typesdị mmebi ndị ọzọ nke mmiri nwere ike ibute nsogbu a - ọ naghị ewe oke. Igwe okwu ekweisi na iPhones mebere ochie na ọdụ ụgbọ mmiri Lightning na ọhụrụ iPhones bụ abụọ n'ime oghere dị na mpụga nke iPhone, nke ahụ na-eme ka ha nwee ike ịmịcha mmiri. Ọbụna ma ọ bụrụ na ihe ndị ọzọ nke iPhone na-arụ ọrụ zuru oke mgbe ọ dị mmiri mmiri, ụda isi okwu ma ọ bụ ọdụ ụgbọ mmiri nwere ike ọ gaghị.
Ọ bụrụ na etinyere iPhone gị na 1000 iberibe, ikekwe ị maara ihe na-adịghị mma. Ọ bụrụ na ọ ka nọ n'otu ibe, enwere ihe ọzọ doro anya mere iPhones ji arapara na ọnọdụ isi: Igweisi ekweisi ma ọ bụ ọdụ ụgbọ mmiri Lightning na-ewepụ na bọọdụ mgbagha.
“Chere nke abụọ. M na-m iPhone na ukwu ọdịdị. ”
Ugnye nkwụnye ekweisi na na nke iPhone gị kwesịrị mgbe kpata nsogbu a. Ahụtụbeghị m na ọ ga-eme site na iji ya. Nke a bụ ajụjụ m ga - ajụ: 'you na - agbanye ekweisi gị na iPhone gị mgbe ị na - ejighi ya?' Onye ahịa ahụ ga-asị ee. (Bịa chee echiche, otu Genius ahụ tụgharịrị m na aghụghọ BIC gwara m nke a kwa. M ga-enye ya otuto ma ọ bụrụ na echeghị m na ọ nwere ike banye na nsogbu.) You nwere ike ịkọ nkọ ihe mere ebe a ?
Mgbe obere oge gachara, nsogbu sitere na ekweisi ekpuchi na iPhone na njedebe gbakwunyere jaketị ekweisi ma ọ bụ ọdụ ụgbọ mmiri Lightning ghọrọ nke ukwuu nke na ha malitere ịwepụ kpamkpam na bọọdụ mgbagha. Ọ dị mma iji kechie ekweisi gị na iPhone, ọ bụrụhaala na ị kwụpụrụ ha mgbe ị mere.
O di nwute, ọ bụrụ na ị na-agụ nke a, enwere ezigbo ohere mmebi ahụ emeworị ma ị ga-achọ idozi iPhone gị.
Mmezi Nhọrọ: Apple vs. Puls
Nsogbu a na-ewute ndị na-aga Apple Store karịsịa naanị idozi nhọrọ Apple na-enye idozi a gbajiri ekweisi Jack bụ dochie iPhone niile. Ọtụtụ ndị mmadụ na-ajụ nanị, na-ahọrọ kama iji ekweisi Bluetooth ma ọ bụ ebe a na-ekwu okwu iji mee ma nata oku ekwentị, mana ọ bụ isi nhụsianya mgbe ụda anaghị arụ ọrụ na iPhone gị.
Ikpe ahụ yiri nke ọdụ ụgbọ mmiri iPhone Lightning gbajiri agbaji. Apple ga-Elezie dị dochie gị iPhone ma ọ bụrụ na ya Lightning mmiri n'ọdụ ụgbọ mmiri na-agbajikwa. Ndị nnọchi gị kpuchitere gị AppleCare + akwụkwọ ikike.
Iji mee ka ihe ka njọ, irighiri irighiri ihe dị n’ime eriri igwe ntị gị ma ọ bụ ọdụ ụgbọ mmiri Lightning n’okpuru akwụkwọ ikike, yabụ idozi nsogbu a dị mfe nwere ike ukwu dị oke ọnụ.
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịrụkwa iPhone gị taa maka otutu erughị Apple, Pulse ga-ezute gị n'ụlọ ma ọ bụ ọnọdụ ị họọrọ n'ime ihe na-erughị otu awa, ha na-enye akwụkwọ ndụ oge niile n'akụkụ na ọrụ.
Nweta ekwentị ọhụrụ
Ikwesiri ịtụle inweta ekwentị ọhụrụ karịa ịrụzi nke ugbu a. Mmezi iPhone nwere ike ịdị oke ọnụ ngwa ngwa. Ọ bụrụ na ihe karịrị otu mebiri emebi - nke a na - ahụkarị ma ọ bụrụ na idobe iPhone gị ma ọ bụ kpughee ya na mmiri - ụlọ ọrụ na - arụzi ihe ga - edochi akụkụ ọ bụla, ọ bụghị naanị ụda isi. Lelee UpPhone ekwentị tụnyere ngwá ọrụ iji nyochaa nhọrọ gị!
Ọ na-akụda mmụọ mgbe iPhone rapaara na ọnọdụ ekweisi, n'ihi na ọ dị ka nsogbu dị mfe kwesịrị ịnwe azịza dị mfe. Ọ bụ ihe nwute na obere irighiri ihe ma ọ bụ obere ntakịrị mmiri nwere ike ịnwe mmetụta dị njọ na iPhone gị. Eji m obi m niile na-atụ anya na iPhone gị anaghị araparazi na isi okwu, ma ọ bụrụ na ọ bụ, opekata mpe ihe ị ga-eme. Enwere ike ịhapụ ikwu okwu n'okpuru. Ọ ga-amasị m ịnụ banyere ụzọ okike ọ bụla ịchọtara iji wepụ ihe mkpofu si na isi okwu isi ma ọ bụ ọdụ ụgbọ mmiri Lightning nke iPhone gị.